भूपू गोरखा सैनिक बास्केटबल शुरु – Todaypokhara
भूपू गोरखा सैनिक बास्केटबल शुरु
पोखरामा सोमबारदेखि तेस्रो भूपू गोरखा सैनिक अन्तर बटालियन गोल्डकप बास्केटबल प्रतियोगिता शुरु भएको छ। भूपू सैनिक खेलकुद संघले बास्केटबल प्रतियोगिताको आयोजना गरेको हो।
६१ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको उपलक्षमा पोखराको काजीपोखरीस्थित बास्केटबल कोर्टमा शुरु प्रतियोगिताको मुख्य प्रायोजन द गोर्खाज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.ले गरेको छ।
भारतीय पेन्सन क्याम्प रामबजारका कर्णेल प्रतिक शर्माले प्रतियोगिताको उद्घाटन गरेका हुन्। कर्णेल शर्माले भूपू गोर्खाजहरुले फौजी जीवनपछि पनि सामाजिक क्षेत्रमा उत्तिकै सक्रिय रहेको पाउँदा आफूले गर्व गरेको बताए।
प्रतियोगिताको पहिलो दिन सात खेल सम्पन्न भएको छ। उद्घाटन खेलमा थर्ड फोर्थ गोर्खा राइफल्सले फस्ट फोर्थ गोरखा राइफल्समाथि ६५–६१ ले जित निकाल्यो। त्यस्तै, दोस्रो खेलमा फस्ट फोर्थ गोर्खा राइफल्सले सेकेण्ड फाइभ गोर्खा राइफल्समाथि ५१–२९ को फराकिलो स्कोरले हराउन सफल रह्यो।
तेस्रो खेलमा फाइभ थर्ड गोर्खा राइफल्सले फस्ट फाइभ गोर्खा राइफल्समाथि ६४–५४ को स्कोर निकाल्यो। त्यसैगरी, चौथो खेलमा थर्ड फाइभ गोर्खा राइफल्सले फाइभ फोर्थ गोर्खा राइफल्सलाई ९१–३५ को फराकिलो अङ्कले हरायो।
पाँचौ खेलमा थर्ड एट गोर्खा राइफल्सले फाइभ फस्ट गोर्खा राइफल्समाथि ५९–४१ को अन्तरले हराउन सफल रह्यो। छैटौं खेलमा थर्ड फाइभ गोर्खा राइफल्सले फस्ट फोर्थ गोर्खा राइफल्सलाई ५२–४८ को झिनो अन्तरले हरायो। त्यस्तै, सोमबारको अन्तिम खेलमा सोभेन एट गोर्खा राइफल्सले थर्ड नाइन्थ गोर्खा राइफल्समाथि ६१–५५ स्कोरले हरायो।
प्रतियोगिताको विजेताले नगद २५ हजार र उपविजेताले १५ हजार, ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र पुरस्कार पाउनेछ। प्रतियोगिताको बेष्ट प्लेयर र हाइस्कोररले नगद १५ सय तथा ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र पाउनेछन्।
मंगलबार सातवटै खेल हुने आयोजकले जानकारी गराएको छ। लिग कम नक आउटका आधारमा सञ्चालित प्रतियोगितामा १५ टिमको सहभागिता छ। आयोजक भूपू सैनिक खेलकुद संघका अनुसार विहिबारसम्म प्रतियोगिता सञ्चालन हुनेछ।
संघका अध्यक्ष क्या. प्रेमप्रसाद गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा उपाध्यक्ष सु. असिलकुमार शाहीले स्वागत र सचिव सु. जितबहादुर गुरुङले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए। कार्यक्रममा मेजर डा. शिव महतको समेत उपस्थिति थियो।
दोश्रो बिरेन स्मृती कप तथा १२ औ बिटी कपमा आयोजक बिटी ब्लुको बिजयी शुरुवात